mayelana Ukraine - Isifundo e-Ukraine. Ukrainian Ukwamukelwa Center
Ngokuhamba 500 imizi Ukraine wasungula ezingaphezu kuka 900 iminyaka edlule, futhi 4,500 emizaneni Ukraine bangaphezu kuka 300 iminyaka budzala.
Bangaphezu kuka-150-thousand izikhumbuzo isiko, umlando, nemivubukulo sibonakalise omlando omuhle kakhulu abantu Ukraine. 80 % amatshe ezikhumbuzo of Kyivan Rus okuqinisekile (IX – Emakhulwini eminyaka XII) basuke bagxila ensimini yase-Ukraine.
Isibuyekezo sokugcina:22 May 19